Puntland oo soo bandhigtay Xubno Daacish iyo Shabaab ka tirsan oo ciidamada ay qabteen (SAWIRRO) – STAR FM SOMALIA
Maamulka Degmada Boosaaso ee Gobolka Bari, ayaa Magaaladaasi waxa ay ku soo bandhigeen saddex nin oo ka tirsan Shabaab iyo Ururka Daacish sida ay qirteen raggaasi.
Saddexdaan nin ayaa labo ka mid ah siyaabo kala duwan loogu qabtay Koontaroolka Magaalada Boosaaso, halka midka kalena lagu qabtay Garoonka Diyaaradaha Magaaladaasi.
Axmed Aadan Cabdulaahi Aw-Cabdi (Shaafici) ayaa sheegay inuu muddo afar sano ah ka tirsanaa xoogaga Al Shabaab ee ku dhuumaalaysta buuraha Calmadow ee bariga Puntland , Isagoona intaas ku daray inuu markii danbe ku biiray kooxda magaceeda la yiraahdo Daacish balse ay ku qabteen kantaroolka Boosaaso ciidamada Amniga.
Labada nine e kale ayaa lagu kala magacaabaa Muuse Aadan Maxamed (Gaal-dile) iyo Cabdulaahi Ibraahim, waxaana C/laahi uu sheegey in muddo laga joogo 15 cisho ka hor uu ka soo baxsaday Shabaabka ku sugan qaybo ka mid ah Buuraha Galgala ee Gobolka Bari.
Ninka naaneeysta ay tahay Gaaldile, ayaa isagana wuxuu sheegay inuu ka tirsan yahay Ururka Daacish ee ku sugan Buuraha Galgala.
Xubnahan saddexda ah oo Saxaafadda u waramay waxa ay sheegeen inay ka cabsi qabaan in Shabaab iyo Daacish ay bartilmameedsadaan, balse hada ay ku jiraan gacanta ciidamada ammaanka Puntland.
Puntland ayaa sheegtay raggaan in laga qaadi doono tallaabo sharciga waafaqsan oo ku aadan inay ka tirsan yihiin Shabaab iyo Daacish.
Daacish ayaa Saldhigyo ciidan waxa ay ku leeyihiin Gobolka Bari ee Puntland, kadib markii sida la sheegay Shabaabkii halkaasi ku sugnaa ay ku dhawaaqeen inay si toos ah ugu biireen Daacish.
DHAGEYSO:-Warka Duhur Starfm 20-08-2016